Top 5 Atụmatụ maka Survey Greatness | Martech Zone
E nwere otu eziokwu dị mfe nke oge presentedntanetị gosipụtara: feedbackchọta nzaghachi na inweta nghọta n'ime isi ahịa gị na ahịa ahịa dị mfe. Nke a nwere ike ịbụ ihe magburu onwe ya ma ọ bụ ihe na-atụ ụjọ, dabere na onye ị bụ na ihe ị na-achọ nzaghachi maka, mana ọ bụrụ na ị nọ n'ahịa iji jikọọ na ntọala gị iji nweta echiche ha n'eziokwu, ị nwere tọn nke free na-eri irè nhọrọ ime. E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga - esi mee nke a, mana m na - arụ ọrụ SurveyMonkey, yabụ ebe m nwere bụ nka, ịmepụta nyocha nke ntanetị nke na-enye nsonaazụ doro anya, nke a pụrụ ịdabere na ya.
Anyị na-anyị ozi-enyere gị aka ime mkpebi kasị mma kwere omume kpọrọ, ma ị na-agbalị ikpebi nke foto iji na mkpuchi, nke ngwaahịa ndozi na-ebute ụzọ, ma ọ bụ nke appetizers na-eje ozi na gị igba egbe ọzọ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nwetụbeghị nyocha ịntanetị, ma ọ bụ na-echegharị gị site na njirimara niile (mafere mgbagha? Nke ahụ ọ bụ ụdị ugwu abụọ ??)
M ga-azọpụta intricacies nke anyị nnyocha e mere atụmatụ maka oge ọzọ (ezie na m nwere ike n'enweghị agwa gị, Mafere Logic enweghị ihe jikọrọ ya na ụdọ ịwụ elu). Mana aga m ekerịta gị ndụmọdụ ndị a kachasị mma nke 5 iji mepụta nyocha dị n'ịntanetị.
1. O doro anya na Kọwaa Nzube Gị Online Survey
Wouldn't gaghị ebido mgbasa ozi mgbasa ozi na-enweghị ịkọwapụta ebumnuche nke mkpọsa ahụ (ịbawanye mmata nke ọma, ịmegharị mgbanwe, mebie ndị asọmpi gị, wdg), ị ga-eme? Ebumnuche na-enweghị isi na-ebute nsonaazụ na-edoghị anya, na nzube niile nke izipu nyocha n'ịntanetị bụ iji nweta nsonaazụ nke dị mfe nghọta ma mee ihe. Ezi nnyocha nwere otu ma ọ bụ abụọ lekwasịrị anya na ebumnuche ndị dị mfe nghọta ma kọwaa ndị ọzọ (ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọwa ya n'ụzọ dị mfe 8th grader, ị nọ na nri track). Wepụta oge n'ihu iji mata, na ide:
Kedu ihe kpatara ị na --emepụta nyocha a (gịnị bụ ebumnuche gị)?
Kedu ihe ị tụrụ anya na nyocha a ga-enyere gị aka imezu?
Mkpebi ndị ị na-atụ anya ịmetụta na nsonaazụ nke nyocha a, gịnịkwa bụ usoro data metachi ị ga-achọ iji ruo ebe ahụ?
Obviousda doro anya, mana anyị ahụla ọtụtụ nyocha ebe nkeji ole na ole ịhazi atụmatụ nwere ike ịbụ ihe dị iche na ịnweta nzaghachi nke ọma (nzaghachi nke bara uru ma rụọ ọrụ) ma ọ bụ data enweghị nkọwa. Inweta a nkeji ole na ole n'ihu na njedebe nke gị nnyocha e mere ga-enyere iji hụ na ị na-ajụ nri ajụjụ izute ebumnobi na n'ịwa bara uru data (na ga-azọpụta gị a ton nke oge na isi ọwụwa na azụ ọgwụgwụ).
2. Mee ka nyocha ahụ dị mkpụmkpụ ma lekwasị anya
Dị ka ọtụtụ ụdị nkwurịta okwu, nyocha ịntanetị kachasị mma mgbe ọ dị mkpụmkpụ, dị ụtọ, na ruo n'ókè. Obere ma lekwasị anya na-enyere ma mma na ọtụtụ nzaghachi. Ọ ka mma ilekwasị anya na otu ebumnobi karịa ịnwa ịmepụta nyocha nna ukwu nke kpuchiri ọtụtụ ebumnuche.
Nnyocha ndị dị mkpụmkpụ na-enwekarị nzaghachi dị elu ma na-agbahapụ ntakịrị n'etiti ndị na-aza ajụjụ. Ọ bụ ọdịdị mmadụ ịchọ ka ihe dị ngwa ma dịkwa mfe - ozugbo onye nyocha na-efunahụ mmasị ha na-ahapụ ọrụ ahụ naanị - na-ahapụrụ gị ọrụ adịghị mma nke ịkọwa akụkụ data ahụ anya (ma ọ bụ kpebie ịtụfu ya ọnụ).
Gbaa mbọ hụ na ajụjụ ọ bụla gị lebara anya n’inyere gị aka imezu ebumnuche gị (Don'tnweghị otu? Etinyekwala ‘ọmarịcha ịnwe’ ajụjụ na-anaghị enye data iji nyere gị aka imezu ebumnobi gị.
Iji jide n'aka na nyocha gị dị mkpụmkpụ, oge ole na ole ka ndị mmadụ na-ewe ya. SurveyMonkey research (tinyere Gallup na ndị ọzọ) egosila na nnyocha e mere kwesịrị iwe 5 nkeji ma ọ bụ obere iji wuchaa. Nkeji 6 - 10 na-anabata ma anyị na-ahụ nnabata gbapụrụ agbapụ na-eme mgbe nkeji iri na otu.
3. Mee Ka Ajụjụ Ndị ahụ Dị Mfe
Gbaa mbọ hụ na ajụjụ gị ruru n’isi ma zere iji jargon metụtara ụlọ ọrụ. Anyị enwetawo nyocha na ajụjụ dịka usoro: “Kedu mgbe ikpeazụ ị jiri nke anyị (fanye ulo oru oru mumbo jumbo ebe a)? "
Echekwala na ndị na-eme nnyocha nyocha gị nwere ntụsara ahụ na njiri mara gị dịka ị dị. Kpopee ya nye ha (cheta na 8th grader ị gbara ọsọ gị ebumnobi site? Gwa ha nzaghachi - nke oma ma obu nke eche - maka usoro a).
Gbalịa ịjụ ajụjụ gị ka ọ kapịrị okwu ọnụ ma kwuo ihe achọrọ gị. Tulee: Gini mere na ahu na ndi otu anyi na aru oru? Iji: Kedu afọ ojuju ị nwere na oge nzaghachi nke ndị otu HR anyị?
4. Jiri Ajuju Emechiri Emechi mgbe obula enwere ike
Emechiri emechi ajụjụ nyocha na-enye ndị zaghachiri nhọrọ ụfọdụ (dịka Ee ma ọ bụ Mba), na-eme ka nyocha gị rụọ ọrụ ọfụma. Emechibidoro ajụjụ nwere ike were n'ụdị ee / ee, ọtụtụ nhọrọ, ma ọ bụ akara ogo. Open okokụre nnyocha e mere ajụjụ na-enye ndị mmadụ ohere ịza ajụjụ n'okwu nke aka ha. Ajụjụ ndị mepere emepe dị oke mma iji gbakwunye data gị ma nwee ike ị nweta ozi tozuru etozu na nghọta. Mana maka ebumnuche na nyocha, emechibidoro ajụjụ ndị siri ike iti.
5. Nọgide Na-atụle Ogologo Ajuju Ajuju Site na Nyocha
Akpịrịkpa akara bụ ụzọ dị mma iji tụọ ma tụnyere usoro nke mgbanwe. Ọ bụrụ nhọrọ iji akpịrịkpa akara (dịka site na 1 - 5) gbaa mbọ hụ na ijide ha oge niile nyocha ahụ. Jiri otu ọnụ ọgụgụ dị na ọnụ ọgụgụ (ma ọ bụ nke ka mma, jiri okwu nkọwa), wee hụ na nkọwa nke ịdị elu na nke dị ala na-agbanwe agbanwe n'oge nyocha ahụ. Ọzọkwa, ọ na - enyere aka iji ọnụọgụ abụọ na ọkwa gị iji mee ka nyocha data dị mfe. Gbanwe ọnụego gị na-emegharị ga-emegharị ndị nyocha nyocha, nke ga - eduga na nzaghachi na-enweghị ntụkwasị obi.
Nke ahụ bụ ya maka ndụmọdụ 5 kachasị maka ịdị ukwuu nyocha, mana enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-eke nyocha ịntanetị gị. Lelee azụ ebe a maka ndụmọdụ ndị ọzọ, ma ọ bụ lelee anyị SurveyMonkey blog!
Tags: mmechi ajụjụ nyochaemeghe-biri nnyocha e mere ajụjụakpịrịkpamafere mgbaghanyocha nyochaogologo nnyochaebumnuche nyochaajụjụ nyochaAtụmatụ nyochaSurveyMonkeynyochazoomerang
Are Na-enweghị Isi nke 500
“Jide n'aka na aj uj u nke ob ula na-enyere gi aka imezu ebumnobi gi
Isi ihe. Chọghị iji oge ndị mmadụ jụọ ajụjụ dị oke mkpa. Oge onye ahịa bara uru, egbula ya na ajụjụ efu!